နိဒါန်းဂျာမနီအလယ်ပိုင်း-အနောက်ပိုင်းဥရောပဒေသတွင်တည်ရှိသည်ဂျာမနီမှာနေတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အမည်ကိုတရားဝင် "ဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 137,847 စတုရန်းမိုင် (357,021 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ၏မြေဧရိယာရှိပါတယ်။ ဂျာမဏီလူဦးရေရဲ့ကဥရောပသမဂ္ဂအီးယူ၏လူဦးရေအများဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး) အောင် 82 သန်းမှာခန့်မှန်းထားသည်။ ဂျာမဏီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြီးနောက်, ကမ်ဘာပျေါတှငျ 2nd လူကြိုက်အများဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးတည်ရာရှိပါတယ်။ ဂျာမဏီရဲ့မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာမြို့တော်ဘာလင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အသံစီးပွားရေးစျေးကွက်ကမ်းလှမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဂျာမနီမှဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဂျာမဏီဥရောပ၏အကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံရတာဟာနှင့်စီးပွားရေးပတ်သတ်ပြီးအတွက်ခြုံငုံကမ္ဘာပေါ်မှာစတုတ္ထအများဆုံး အဆင့်အတန်း.
ဂျာမဏီရဲ့ကြီးတွေနဲ့မတူညီစီးပွားရေးကိုဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်က၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု status ကိုကိုအထောက်အကူပြုရန်သောအောင်မြင်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ, ပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (FDI) ၏ခန့်မှန်းခြေလေးရာခိုင်နှုန်းကဒီဒေသကနေလာပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဂျာမဏီနိုင်ငံခြားရေး၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလားအလာတိုးမြှင့်အခြားလူမျိုးတို့နှင့်တကွဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးအချို့ရှိခြင်းများအတွက်လူသိများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ.
• သာလွန်လုပ်သား: ဂျာမဏီရဲ့လုပ်သားအင်အားနှစ်ဦးစလုံးကောင်းမွန်စွာပညာတတ်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားရာပူဇော်သက္ကာန်ထမ်းကိုရှာဖွေပေးသောနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်၏ဖြစ်ကောင်းတဦးတည်း။
• မြင့်မားသောနည်းပညာ: ဂျာမဏီအဖြစ်ဝေးနည်းပညာဖြစ်သကဲ့သို့မြင့်မားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများပိုင်ဆိုင် စိုးရိမ်ပူပန်.
• Excellent ကကုန်စည်: ဂျာမဏီကမ္ဘာတဝှမ်းအရည်အသွေးမြင့်ကုန်စည်ဖန်တီးလူသိများတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သည် "စေဂျာမနီမှာ" သတိပေးမှုနှင့်အတူတံဆိပ်ထုပစ္စည်းများကိုအရည်အသွေးကောင်းတစ်ဦးနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်လျှောက်လုံးမြင်ကြသည်။
• နိုင်ငံခြားရေးကုမ္ပဏီများ: ဂျာမဏီ 45,000 နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီန်းကျင်အိမ်များနှင့်လူမျိုးထဲတွင်သုံးသန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်အနေနဲ့အလုပ်အကိုင်အမှုနှုန်းပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကမ်ဘာပျေါမှာဦးဆောင်တရားစီရင်မှု၏ဂျာမဏီတနိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပါဝင်စေပြီ။ ၎င်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ကြဉ်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အပေါ်ဂျာမဏီရဲ့တည်ငြိမ်စီးပွားရေးကိုခြေစွပ်သူ့ဟာသူ။ ယင်း၏ဆက်ကပ်အပ်နှံသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတှကျအဂျာမဏီရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုအလွန်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုကူညီ။
• အခြေခံအဆောက်အဦများ: ဂျာမဏီဝယ်ယူမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားသောခိုင်ခံ့သောစားသုံးသူဈေးကွက်အတူရေတွင်းတစ်တွင်း-ဖွံ့ဖြိုးပြီးဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခြေခံအဆောက်အအုံ, ရတာဟာ။
• စီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာစနစ်: ဂျာမဏီရဲ့ဥပဒေရေးရာစနစ်ကအလွန်အသံကဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးကိုအစိုင်အခဲသည်။ ဤအသဘောတရားများကိုနှစ်ယောက်စလုံးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှဂျာမဏီအလွန်အမင်းဆွဲဆောင်မှုစေ။
ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အမည်အားအတည်ပြုပြီးနောက်အသင်းမှများ၏ဆောင်းပါးများရှေ့နေကပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်အပေါင်းတို့နှင့်လက်မှတ်ပေါင်း notarized ။
အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများပြီးစီးခဲ့နေကြသည်ပြီးနောက်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ဒါမှမဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် start-up မြို့တော်အပ်နှံလိမ့်မည်ရှိရာ, ဒေသခံတစ်ဦးကဘဏ်ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သိုက်၏သက်သေရယူပါ။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအဆိုပါဂျာမန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့အထက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းများများ၏ပို့ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားစာရွက်စာတမ်းများတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ, အသင်းအဖွဲ့များ၏ notarized ဆောင်းပါးများ, စီးပွားရေးရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အစီအစဉ်ဖေါ်ပြခြင်းတို့သည်ပြီးစီးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရှယ်ယာမြို့တော်သိုက်၏အထောက်အထားပြသနေတဲ့သိုက်စလစ်များပါဝင်သည်။ ဤပစ္စည်းများကိုအားလုံးအီလက်ထရောနစ်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်သစ်ကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်များအတွက်ဗဟိုအီလက်ထရောနစ်ပလက်ဖောင်းအိမ်ရှင်အဖြစ်။
ထရေးဒင်းလိုင်စင်ထို့နောက်ကော်ပိုရေးရှင်းစီးပွားရေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများဒေသခံရုံးကနေကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီအပြီးတွင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများပတ်သတ်ပြီးအတွက်မေးခွန်းလွှာဖြည့်စွက်, နှင့်စာရင်းအင်းရုံးမှာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စီးပွားကူးသန်း၏အခနျးအဖြစ်အလုပ်သမားရုံးနှင့်အတူဤအချက်အလက်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အရေအတွက်က operating ရှစ်ဂဏန်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, entity ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးအာမခံမှုအတွက်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကနျြးမာရေးအာမခံလျှောက်လွှာသူ့ဟာသူပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်၏တည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်ရုံးတစ်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အခွန်အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးဖို့, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီလည်းကော်ပိုရိတ်အခွန်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် VAT.
ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီသည်ဤခြေလှမ်းများပြီးဆုံးနှင့်ဂျာမနီမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ပြီးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက၎င်း၏စီးပွားရေးအရဖြစ်စဉ်ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ ဂျာမနီမှာအရပျကိုယူပြီးအများစုကကုမ္ပဏီစတင်-ups သဘာဝကျကျန်ထမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဂျာမနီမှာထည့်သွင်းဖို့တစ်ခုမှာအကျိုးအတွက်ထံမှကောက်ယူအဖြစ်ပါရမီန်ထမ်းရှာဖွေတာနှင့်အတူမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအထောက်အကူပြုနိုင်သောအလုပ်အကိုင်အကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများမှရာမှတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားလုပ်သားအင်အားလည်းမရှိသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျာမနီမှာထည့်သွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမိမိတို့၏ရာထူးဖြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးန်ထမ်းကိုရှာဖွေခွင့်အလမ်းအများအပြားရှိသည်။
ဂျာမနီကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုယင်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းကမ်းလှမ်း: မြင့်မားတဲ့နည်းပညာ, တစ်ဦးထက်သာလွန်လုပ်သားအင်အား, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုကုန်ပစ္စည်းများ, အစိုင်အခဲအခြေခံအဆောက်အဦများ, အသံစီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေစနစ်; အရာ 45,000 ကျော်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိလုပ်ကိုင်ရန်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။